musha United Kingdom Vatapi venhau Mehdi Hasan Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Mehdi Hasan Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yeUdiki hwake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai, Mwana, Mararamiro, Net Kukosha, uye Hupenyu Hwega.
Muchidimbu, ichi Chinyorwa cheHupenyu chemuAmerican-Briteni mutori venhau. Kuti uwedzere hupenyu hwako, tine pfupiso yakakwana yeBio yake - kubva pamazuva ake ehudiki kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Iwe unogona kunge wakamuona paAljazeera kwaanosimbisa maChirungu anoratidza sekuti, 'The
Café, Musoro kuMusoro uye Kumusoro Pamberi '.
Iye anozivikanwa zvakare semunyori wezvematongerwo enyika, Broadcaster, uye munyori. Gara wakatarwa kunyangwe patinenge tichizarura nekukupa iwe inonakidza nhoroondo yeupenyu yaMehdi Hasan.
Mehdi Hasan Zvekucheche Nyaya:
Kutanga, mutungamiriri weAljazeera akazvarwa musi we 10th yaChikunguru 1979 muSouthwestern England guta reSwindon. Mazita ake akazara ndiMehdi Razan Hasan.
Kuzvarwa nevabereki vake veIndia muEngland kunomuita otomatiki Mugari weBritish.
Ma1970s, pakazvarwa Mehdi, yaive nguva yehondo yezvehupfumi, shanduko yetsika, uye hunyanzvi hwekugadzira zvinhu. Nguva iyi yakaona kodzero zhinji dzevakadzi, kodzero dzevanhurume nevanhukadzi, uye kufamba kwenzvimbo.
Asati akura, anofanira kuve akatsungirira kudzidziswa zvine hukama nekwaMuslim kweMashure uye zvaidavirwa. Mehdi Hasan aingova nehanya nehanya semwana achiri kukura muEngland.
Izvo zvinodikanwa zvakakosha zvemwana, zvekugara, zvehutano uye zvekudya zvine mwero zvaive
Mehdi Hasan Mhemberero Yemhuri:
Haasi mazhinji mhuri angakwanise kutamira kuUK. Zvakadaro, vabereki vaMehdi Hasan vakakwanisa kuzviita nekuda kwenzvimbo yavo yepamusoro-yepakati-kirasi.
Kufuma kwemhuri kwakapa Hasan mikana yekutarisa panzira yake yebasa kubva pakutanga kwekutanga.
Mehdi Hasan Mhuri Kubva:
Vamwe vanhu vanomutora kuve 'Pakistani'. Nekudaro, kubvira paakazvarwa muSwindon, England. Mehdi Hasan ndiBritish.
Iye zvakare ane chizvarwa cheIndia, sevabereki vake vese vaive vatorwa kubva kuguta repamusoro rinozivikanwa seHyderabad muSouthern India.
Mepu inoratidza Mehdi Hasan Nzvimbo yekuzvarwa.
Iyewo ari America nekuzvarwa. Saka tinogona kuti Mehdi muBritain- American
wedzinza reIndia. Nekuda kwerudzi rwake rwakasanganiswa.
Mehdi Hasan Dzidzo:
Pakadaro Career yake isati yatanga, iye akange awana urefu hwakawanda hwedzidzo sezvatichaona, zvichitevera munguva pfupi.
Hasan akapinda Chikoro cheUngu Independent cheVakomana paSandy Lodge muTatu Rivers District yeHertfordshire, padyo neguta reNorthwood kuNorth West London. Chikoro cheZuva chinozivikanwa seMutengesi Chikoro cheChikoro.
Chiono chemuchadenga cheVatengesi Chikoro 'Chikoro, Northwood.
Nguva pfupi yapfuura, akaenda kuChrist Church; koreji inovakwa yeYunivhesiti yeOxford. Zvakakodzera kuti Cherechedzo ndeyekuti Oxford ndeimwe yemayunivhesiti ekare eBritish.
Mehdi akawana dhigirii muFilosofi, Zvematongerwo enyika uye Economics uye akapedza kudzidza, uye gore, 2000 zvichiteerana.
Mehdi Hasan Nhau Yebasa:
Mukupokana nemugwagwa wake wekurumbira, akawana Jobho zvese semuongorori uye mugadziri weLondon Weekend TV. Yake BBC TV pfupi kusarudzwa kwaizotevera zvishoma, zvichiita kutanga kweyaizove hupenyu hwaMehdi hupenyu hurefu.
Mehdi Hasan Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Achangopedza basa rake renguva pfupi reBBC, mimwe mikana yakawanda yakavhurwa. Mehdi akabuda semutevedzeri wemutungamiri wekugadzira paBritish vhiki revhiki Kudya Kwemangwanani kunonzi 'Sunrise.'
Nguva pfupi yapfuura akabva aenda kune yeruzhinji yemahara-kumhepo TV, achiri kuUK. Asi ino nguva, seMupepeti weNhau uye Zvazvino zviitiko.
Muna 2009, Hasan akagadzwa saMupepeti Mukuru paBritish Political Magazine, New Statesman. Kukwidziridzwa kwake seMupepeti mukuru kwaizopera kusvika muna2012.
Kunyanya gare gare kwegore rimwe chete, Medhi akagamuchira kusarudzwa neAmerican news aggregator uye Blog inozivikanwa seHuffPost kune chinzvimbo chePolitical director.
Mehdi Hasan Bio - Kumuka Mukurumbira Kubudirira Nhau:
Panguva ino, tichave tichitarisa kumusoro kwekumusoro kune mwenje. Kubhururuka kwa Mehdi kuve mukurumbira kwakatanga muna Chivabvu 2012.
Akagadzwa semuratidziri pa Qatar yeChirungu nhau chiteshi, Aljazeera. Iyo Qatar inobhadhara-TV nhau chiteshi ine yayo Musoro mukuru muDoha, Qatar.
Zvimwe zviitiko zvakawanda zvaizotevera, zvakaita sekuonekwa kwake paBvunzo Nguva yeBBC yeanenge matanhatu (6) nguva. Zvimwe zviitiko zvinosanganisira; inoratidzira pazvirongwa 'Mubvunzo Nguva' uye 'Svondo Mangwanani Kurarama' zvichiteerana.
Mehdi Hasan paUmberi anozivikanwa nehurukuro dzakapinza, nharo dzakasimba uye kusekesa kwezvematongerwo enyika.
Pasina kutaura nezveImberi iyo inopa yeInternational svondo nhau kuburikidza nekubvunzana kwakapinza, nharo dzakasimba uye kusekesa kwezvematongerwo enyika.
Chirongwa cheTV chakabata vanhu vane mukurumbira kusanganisira mutungamiri wenyika uye vatungamiriri venyika.
Mehdi Hasan mune gakava nemutungamiri weNigeria muna 2015.
Muna 2018, Hasan akatanga podcast yakanzi Deconstructed; panguva yaaifanira kutamira Washington DC.
Iyo Podcast, inofunga zvese zvinoitika nhau zviitiko, kunyangwe kuMutungamiri Basa raDonald Trump pa Twitter. Mehdi wekutanga muenzi nyeredzi kuonekera aive Bernie Sanders.
Mehdi Hasan pakugona kwake paMSNBC TV ichiita basa rake. 📷: newenglishreview
Mehdi Hasan Mudzimai:
Zvakanyanyisa kuenderana nekudanana kwemukurumbira uye hukama hukama. Mehdi Hasan nyaya yerudo haina kusarudzika.
Zvakadaro, isu tinoziva kuti Mehdi haasi ngochani uye anga ari muhukama achiri kuCollege. Munguva pfupi yakwana, mudiwa wake wemuKoreji akava mukadzi wake.
Kunyangwe hazvo Hasan achiedza kuchengeta hupenyu hwake hwerudo pachivande, anonakidzwa nehupenyu hwakavanzika nemukadzi wake anoyemurika nevana vavo. Aigaro taura nemukadzi wake mune zvinyorwa zvake uye twitter post.
Mehdi Hasan Hupenyu Hwemhuri:
Sezvazviri zvichitaurwa, mhuri ndiyo inonyanya kurwisa muhupenyu hwemwana. Kuratidzwa kwakazara uye kusingazununguki kwekutenda kwaMehdi seMuslim anoratidza kwake kwakasimba mhuri yemuIslam. Tevedza kuburikidza apo isu tinokutora iwe kuburikidza nemhuri yake.
Nezve Baba vaMehdi Hasan:
Kana iwe uine baba vakanaka kana kwete iri kuratidza kwako kwepamoyo tsika uye hunhu. Mehdi's Baba vanofanirwa kunge vakaita zvakawanda kuti vawane kushivirira kwatinoona muMutori wenhau. Kunyange, kwete zvakawanda zvatinoziva nezvake; aive injinjiniya achibva kuHyderabad, India. Nehurombo, iye anononoka.
Nezve Amai vaMehdi Hasan:
Neiyo hurukuro yakazara nezve feminism uye shanduko yayo yapfuura kunyanya munharaunda yeWestern.
Zvingave mune zvimwe kucherechedza kuti Mehdi, yakaratidza kutsigira vakadzi uye yakashora zviito zvese zverusaruro nekusarongeka zvavanosangana nazvo.
Uye saka anofanira kunge aishivirira naAmai vake futi. Nekudaro, iwo mashoko aamai vake haawanikwe.
About Mehdi Hasan Vana:
Sezvambotaurwa, muBritish Mutori venhau ndibaba vane manyawi kune vekwavo. Yakawanda yekunakidzwa, kudziya uye kusunga kwakacherechedzwa kwakatenderedza Mehdi nevana vake. Pane imwe nguva munaJuly 2018, Mehdi akaonekwa achitarisa iyo Wolrd Cup nemwanasikana wake waaida.
Mufaro wenguva iyoyo waisakwanisa kuve wakangwara sezvo aifanirawo kuugovana pa Twitter.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Mehdi Hasan's Vanun'una:
Zvino ngatitarisei kuti mangani maHama (s) kana hanzvadzi (s) maMuslim Mutori wenhau. Nekuda kwemaitiro akangwara aMehdi, kwete zvakawanda zvatinoziva nezvehama dzake. Nekudaro, isu tinoziva kuti ana Sisi, hongu vane mabviro akafanana.
Mehdi Hasan Hupenyu hweMunhu:
Haven akataura nezve hupenyu-hwemhuri hwemutori venhau vekuBritain; ngatitorei zano kubva pabasa rake. Kuve nechiratidzo chake chekuzvarwa iCancer, zvinoita kuti Mehdi ave nehanya, akavimbika uye akatsunga kugadzirisa zvinhu.
Zvake zvinokuvaraidza zvinosanganisira Kuverenga, Kuteerera kumimhanzi, uye maMovie. Mehdi anonyanya kufarira mutambi uye Muimbi ndivo Jennifer Aniston uye Johnny Depp, zvichiteerana. Zvekare, kwake kurota Holiday yekuenda inoratidzika kunge iri kuMoscow.
Mehdi Hasan haambofi akarasikirwa kugovera maonero ake pane yega nharo inopokana ine hukama neIslam uye ugandanga, kubvisa nhumbu, chitendero uye vakadzi vanoratidzwa. Ona mufananidzo wake Trevor Noah Kuratidzwa Kwezuva Nezuva, pazasi.
Mehdi Hasan - Kuongorora Yekupedzisira Democratic Presidential Gakava ra 2019 paTrevor Noahs 'Iyo Yemazuva Show. 📷: wisconsingazette
Mehdi Hasan Mararamiro:
Yapfuura makore gumi kubvira mutapi venhau anoshamisa ave achiwana muJenhau. Mehdi ine mari inofungidzirwa kuti inosvika $ 100,000 - $ 1M.
Iyi Net kukosha inoverengerwa nekuwedzera zvese zvivakwa zvinhu (chero chinhu chakakosha) uyezve kubvisa zvese zvako zvikwereti.
Muavhareji yemubhadharo weU.S. ingangoita zviuru makumi mashanu zvemadhora, uye makumi maviri muzana veAmerica vane mari yemhuri ye $ 100,000 kana kupfuura.
Uye saka izvi zvinoita Mehdi zvakanaka pamusoro pevhareji. Zita raHasan rakaonekwa semumwe wevane zana 'vane simba' maBritish kuburikidza nevezvenhau veTwitter uye yakawedzerwa mune yepagore runyorwa runyorwa rwe 'Ivo mazana mashanu Vane Simba Vane Simba' munyika ('VaMuslim 500').
Mehdi Hasan Untold Chokwadi:
Mukutenderedza nyaya yedu yehudiki uye chinyorwa cheBiography, isu tinopa ruzivo iwe rwaungangodaro iwe wanga usingazive nezve kune anohwina mubairo mutori venhau weBritish uye wezvematongerwo enyika. Pasina kumwe kunonoka, ngatitorei bhora kutenderera.
Chokwadi #1 - Munyori
Kunze kwekuve vashandi veTV, Mehdi zvakare munyori wemabhuku maviri. Kutanga, iyo biography yeaimbova UK Labor Party mutungamiri Ed Miliband. Chechipiri, iye akanyorawo e-bhuku nezvekunetseka kwemari uye austerity economics.
Chokwadi #2 - Ruregerero rweKushoropodza Kwekare
Iyo Al Jazeera Host, inobvuma kuzvidemba pane zvimumumu uye zvinogumbura zvaakataura pamakore ake makumi maviri. Mashoko aya aive akatenderera kusatenda kuti Mwari ariko uye ngochani; yakatumirwa pane yake Twitter bata. Hasan aiti "Panzvimbo pekuviga, ini ndakasarudza kuvarera ini."
Chokwadi #3 - Wanga uchiziva here kuti kubvunza kwake Style kunogona kumutsa?
Nemaitiro ake asingaregi uye kuraira kwechokwadi, zvakakomberedza zviitiko zveUS uye zvematongerwo enyika. Mehdi anomiririra yakanakisa tsika yeutapi venhau nekugara wakasimba uye kufumura manyepo akahwanda sematauriro.
Munguva pfupi yapfuura, Hasan akagamuchira Ilhan Omar paAl Jazeera, kwaakati, MaAmerica pachinzvimbo chekuva vechiIslamophobic "vanofanirwa kutya varume vachena." Ona mifananidzo pazasi.
Mehdi Hasan - Muromo weQatar muAmerica.
Iye weAl Jazeera wekutambira, akamboudzwa Christiane Amanpour kuti kukunda kwaDonald Trump "kuri kunetsekana nenharaunda zhinji dzevanhu vashoma" uye kwete vechiMuslim vemuAmerica chete.
Mehdi, semhedzisiro, yakapihwa maSevhisi kuMedia Media muBritish Muslim Awards muna 2014.
Chokwadi #3 - An Adjunct Muzvinafundo
Ndinovimba iwe hauna kumboziva kuti mudiki uye ane nharo nhepfenyuro, akambove anowedzera mupurofesa. Zviri zvikuru fadza iwe bheji.
Mehdi Hasan akambodzidzisa kuGeorgetown University muWashington, DC. Chaive chiitiko chakanetesa kwaari uye nevadzidzi vake vaimuda. Tarisa uone pazasi pikicha.
Mehdi mumufananidzo anopenga nevadzidzi vake kuGeorgetown University muDC
Chokwadi #4 - Kugonesa Manzwi Mibayiro
Iye asingaregi muromo weKatar muAmerica, zvakare anozivikanwa zvikuru nekutaura kwake achipesana nehuori. Uye nekudaro, iEmpoweringVoices Awards Honoree. Kubvunzurudza kwake kwakaramba kuri kuita kuti adiwe nevasingatauri sekutaura.
Mashoko ake akaona achitaura nezvehunhu hwake. "Ini ndinofarira kutaura kwakasununguka uye kushoropodzwa kwakasimba kwezvitendero zvese," anodaro.
Mehdi, achipa izwi kune vasina kutaura.
Chokwadi #5 - Chitendero chaMehdi Hasan:
Muna 2013, munyori wezvematongerwo enyika akapinda muhurukuro kuOxford Union kusarudza kuti chinamato cheIslam chine rugare here.
Mehdi akabuda pachena seIslam sechitendero chine rugare, kupa zvese zvetsika uye zvematongerwo enyika zvikonzero nei mhirizhonga munyika hombe dzeMuslim, sekushora kupomera chitendero chechiIslam mutoro.
Mufananidzo waMehdi Hasan pamusangano weOxford Union.
Hasan muShia Muslim uye akanyora zvinyorwa nezveIslam uye maMuslim e the New Statesman nemapepanhau.
Mehdi Hasan's Bio- Dhata
Zita rizere: Mehdi Raza Hasan
Zita rekudanwa: Mehdi
Zuva rekuzvarwa: 10 Chikunguru 1979
Nzvimbo yekuzvarirwa: Swindon, England, UK
Nezvekuroorwa: Akaroora (Mumwe mukadzi)
Vanun'una: Imwe (1) Sista
Vana: Ane Vana
Dzidzo: Christ Church, Oxford (Bachelor of Arts muPPE)
Basa: Mutori venhau, mushambadzi, munyori uye muongorori wezvematongerwo enyika
Net Worth: $ 100,000 - $ 1Million (2020)
Hobbies: Kuverenga, Mimhanzi uye mafirimu
Nationality: Britain - yekuAmerica
Ethnicity: Sanganiswa (Maodzanyemba - Dzinza reAsia)
kukwirira: 1.7m / 5 '7 "
Kugara Kwazvino: Washington DC, US
Isu tinofungidzira kuti wakakuwana kuchinakidza, uchiverenga yedu Mehdi Hasan yehucheche nyaya. Isu takanga tichitarisa maitiro aakazvicherera ega niche mune zvemapepanhau kunyangwe zvake aive wechiIslam uye akasangana nedzinza.